Ahoana no handresena ny lehilahy?
Ny vehivavy ankehitriny dia mihamitombo hatrany amin'ny fandraisana andraikitra eo an-tanany, ary tsy maninona na amin'ny asa na amin'ny fitiavana. Ny fiatrehana ny dingana voalohany amin'ny fifandraisana amin'ny lehilahy amin'izao fotoana izao dia lasa fisehoan-javatra mahazatra ho an'ny antsasany tsara. Na dia eo aza ny fandresena ireo olom-boafidy, maro ireo vehivavy manao fahadisoana ary, raha tokony hahatratra ny toerana misy azy, dia mahasarika fotsiny ny adiresiny. Izany no mahatonga ny ankizivavy maro liana amin'ny fomba tokony hialana amin'ny lehilahy iray ary hahazo ny sainy sy ny fitokisany.
Noho izany, misy fomba vitsivitsy izay hanampy anao ho tia lehilahy iray:
Jereo ny endrikao . Ny lehilahy dia mihaino tsara ny endriky ny vehivavy, manao akanjo manandrana, fa tsy manohitra.
Self-education . Raha mikasa ny hanana fifandraisana matotra ianao, dia tadidio fa tsy tian'ny olona ny "dummy", ka manandrama ho tonga namana mpiara-dia aminy.
Asehoy fa liana amin'ny lehilahy iray ianao . Ny ankizilahy iray dia hankasitraka be raha mahita ny fahalalanao mahaliana amin'ny fialam-boly, asa, sns.
Aza alefa . Raha tapitra hatreo amin'ny fandriana ny daty voalohany, dia azo inoana, nanjavona tanteraka ny fahalianan'ilay ankizilahy, fa raha tsy avelanao halefena faran'izay betsaka ianao, dia mifanohitra amin'izay, dia ho liana ianao.
Aoka ho namana azo atokisana . Ho lasa namana tena tsara ho an'ny lehilahy iray, izay mahafantatra azy, mikarakara azy, vonona ny hanampy amin'ny toro-hevitra ary hihaino, raha ilaina, hahazo ny fitokisany, ho lasa olona akaiky, ary efa misy fifandraisana sakaiza afaka mitombo bebe kokoa.
Ankehitriny, ireo ankizivavy izay liana amin'ny fomba handresena ny lehilahy taloha dia hanampy ihany koa ireo toro-hevitra ireo, ny hahafantaranao bebe kokoa ny tovolahy, ny safidiny, ny toetrany , ny sombiny, sns. Ny tena zava-dehibe dia tsy tokony ho mendri-piderana sy miandry mandritra ny fotoana fohy, satria rehefa misaraka ianao dia mila miala sasatra kely. Rehefa afaka iray volana na mihoatra dia afaka manao zavatra ianao.
Firaisana ara-nofo amin'ny famantarana ny zodiaka
Fifanekena momba ny vonjy taitra
Nahoana ny lehilahy no miala tsiny?
Maharary ve ny fanaovana firaisana ara-nofo?
The Building Auditorium (Santiago)
Amin'ny inona no mitafy kiraro jiro?
Adzhika mamy ho an'ny ririnina
Inona no ilainao hanokatra magazay iray?
Sakafo ho an'ny vary
Fanafody antiviralan'ny fitsaboana
Meditation noho ny fitandremana
Nitsidika ny Swaziland ho Ambasadora an'ny UNICEF i David Beckham
Charlize Theron tsy misy sary
25 ny poizina mampidi-doza indrindra fantatry ny olombelona
Okroshka teny amin'ny rano